FBC - Dh.D.U.O Pireezdaantii Mootummaa FDRI duraanii Doktar Nagaasoodhaaf konkolaataa kenne
Dh.D.U.O Pireezdaantii Mootummaa FDRI duraanii Doktar Nagaasoodhaaf konkolaataa kenne
Finfinnee, Gurraandhala 14, 2010 (FBC) Koreen Giddu-galeessaa Dhaabbata Dimookraatawaa Uummata Oromoo Pireezdaantii Mootummaa FDRI duraanii Doktar Nagaasoo Gidaadaadhaa konkolaataan akka bitamuuf haala murteesseen guyyaa har’aa konkolaataa fudhataniiru.
Koreen giddu-galeessaa DH.D.U.O walga’ii guyyoota 10f Magaalaa Adaamaatti taa’ede tureen Pireezdaantiin Mootummaa FDRI duraanii Doktar Nagaasoo Gidaadaa miindaa sooramaa ji’aa dabalatee faayidaalee gara-garaa akka argatan murtaa’uunsaa kan yaadatamudha.
Kanaan wal-qabatee konkolaataa ‘Nissan moodeela’ 2018 birrii miliyoona 3 baasu har’a Waajjira Koree Giddu-galeessaa Dh.D.U.Otti argamanii fudhataniiru.
Doktar Nagaasoo Gidaadaa waadaa Dh.D.U.On seene eegee konkolaataa kana waan kenneef gammachuun akka itti-dhaga’ame Faanaa Biroodkaastiing Korporeetiif ibsaniiru.
Doktar Nagaasoon hanga biyya alaa deemanii akka wal’aanaman baasiin wal’aansaa isaanii akka danda’amu murtaa’uunsaas niyaadatama.
Doktar Nagaasoo Gidaadaa pireezdaantii mootummaa FDRI ta’uun bara 1987tti muudamanii, waggoota 7 f pireezdaantii ta’anii tajaajilaniiru.
Aangoo erga gadhiisanii boodas akka pireezdaantii duraanii ta’uu isaaniitti faayidaa argachuu qaban waggoota 4f argachaa turaniiru.
Filannoo bara 1997tti geggeffame irratti Dambi-Dollootti dorgomaa dhuunfaa ta’uun Paarlaamaa erga seenanii booda garuu faayidaan isaanii akka addaan cite Doktar Nagaasoon himaniiru.
Doktar Nagaasoo Gidaadaa umurii dargaggummaa isaanii jalqabee Itiyoophiyaatti sirni dimookraatawaa akka diriirfamu wayita taasifamu adeemsa ture keessatti hirmaannaa guddaa qabu turani. Kanaafis paartiiwwan siyaasaa gara-garaa waliin hiriiruun gahee mataa isaanii gumaachaa turaniiru.
Barnoota seenaadhaan digrii Doktaraa kan qaban Doktar Nagaasoo Gidaadaa, akka hayyuu ta’uusaaniitti biyya keessaa fi alatti tajaajila gara garaa kennaa turaniiru.
Barnoota barataniinis qorannoowwan aadaa, seenaa fi duudhaa Oromoo calaqqisiisanii fi tokkummaa Itiyoophiyaa cimsan gara-garaa geggeessaniiru.
Oduuwwan Biroo « Galmeen qoramtoota qormaata biyyaalessaa maarsariitiin kallattiin raawwatamaa jira	Koomishiniin Gamtaa Afriikaa Uummannii fi Mootummaa Itiyoophiyaa qormaatilee isaan mudatan darbuuf ga’umsa akka qaban amantaa akka qabu ibse »